सबैको चासोको बिषय हुन सक्छ ! कुकुरले बिजुलीको खम्बा र टायरमा किन फेर्छ पिसाब ? – Dailny NpNews
सबैको चासोको बिषय हुन सक्छ ! कुकुरले बिजुलीको खम्बा र टायरमा किन फेर्छ पिसाब ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ समय: १९:३६:०५
हामीलै कयौपटक कुकुरले बिजुलीको खम्बा (पोल) र गाडीका टायरमा पिसाब गरेको देखेका हुन्छौ । तर हामीले कुकुरलाई यी स्थान किन मन पर्छन वा किन पिसाब गर्छन् भन्ने बारेमा सोचेका छौ त ? आज हामी यसको कारणको बारेमा चर्चा गर्छौ ।